Kedu ihe ịchọta maka Injin Injin? | Martech Zone
Kedu ihe ịchọta maka Injin Injin?
Tọzdee, Disemba 10, 2009 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Enweela mgbanwe na-eme na ụlọ ọrụ ịntanetị n'ịntanetị ruo oge ụfọdụ ugbu a, mana ọ na-akatọkarị nke na-adịbeghị anya. Web saịtị dị mkpa ka a haziri nke ọma… ma n'ikpeazụ a ga-achọta n'ịwa ọdịnaya. Nke ahụ pụtara na nhazi weebụsaịtị yana njikarịcha njinigwe kwesịrị ịjikọkọta ọnụ maka saịtị ịga nke ọma.
Mgbasa mgbasa ozi, karịsịa Twitter, na-amalite izuru okekọrịta ahịa na nlebara anya site na saịtị ibe edokọbara mmekọrịta dị ka Digg, Na-atọ ụtọ na StumbleUpon.
Ebe ọ bụ na m na-ekwusa nke a ruo oge ụfọdụ, ọ bụ naanị ihe ziri ezi na a na-ama m aka maka otu m si eme nke ọma. N’abalị ụnyaahụ, atụmanya kpọrọ m na Laguna Beach wee jụọ m, nke mbụ, ihe m mere. Enyere m nnyocha na DK New Media dị ka ịzụta ụlọ ọrụ izugbe maka ụlọ gị… Aghọtara m otu esi ewu ụlọ ọrụ weebụ maka ụlọ ọrụ ma tinye akụkụ niile ọnụ iji hụ na ọ gara nke ọma. Anyị na-ekwu banyere SEO na m kụjara mgbe a jụrụ m, "Gịnị bụ ịchọta maka?".
Enweghị m azịza. Doh!
N'ikwu eziokwu, enwebeghị m ịchụso mkpụrụokwu akọwapụtara ruo oge ụfọdụ. M na-achụso Ahịa Tech, Teknụzụ Azụmaahịa, Teknụzụ Azụmaahịa n'ịntanetị na Martech Zone. M ugbu a # 2 maka Marketing Tech na # 1 maka ndị ọzọ. M jide banyere 20 ọzọ # 1 tụrụ ma ha abụghị ndị ezi dị ka mkpa.
Ọ bụ nnukwu ajụjụ na nke m gaara enwe ike ịzaghachi ma gbanyụọ ndepụta. N'ikwu eziokwu, ana m echegbu onwe m gbasara njikarịcha nchọta ndị ahịa m karịa saịtị m. Ihe ọzọ m kwuru bụ na ọ masịrị m na saịtị m… bụkwa ezigbo nkatọ. Offọdụ saịtị m na-a .ụ ara. 🙂
Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ nwere SEO na njedebe nke aha saịtị gị, ị ga-enwe ike ịza ajụjụ nke ihe achọtara maka ọchụchọ. You kachasị emeri nyocha ahụ! (Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ị na-aha maka, aga m akwado Semrush).
Iji atụmanya m… ndo enweghị m ike ịza ya na ụsụ. Aga m etinyekwu uche ugbu a ma na-achọ inweta mmeri n'asọmpi ndị ọzọ dị ka online ahịa, wdg M ga-ehichakwa saịtị m ka ha bụrụ ọkachamara!
Nke a bụ ihe ngosi na-adịbeghị anya m mere Gingde blọgụ na njikarịcha Nchọgharị - na a zuru ezu nke zuru ezu na-esi leverage Keywords.
Tags: ịde blọgụ seoụtọahịa techteknụzụ ahịateknụzụ ahịa n'ịntanetịsearch engine njikarịchasearch enginessemrushAseo maka ịde blọgụTwitter
2010: Iyo, Hazie, Kachasị
Dee 13, 2009 na 11: 18 AM
Enweela m òkè nke ndị "cobbler onye ụmụaka enweghị akpụkpọ ụkwụ" oge. Achọpụtara m na ọ bụ nzaghachi na-enweghị njedebe nke ịchọpụta isiokwu ndị mmadụ na-eji ndị were gị n'ọrụ (jụọ ha), isiokwu ndị Google chere na ha metụtara gị na isiokwu ndị na-ewepụta nọmba (nke bara uru ịgafe). Achọrọ m iji Google Webmaster ngwaọrụ ịchọta okwu m na-agbago elu na enweghị m ntụle maka ya. Achọpụtala m ọtụtụ ndị ọkachamara n'ahịa na-abịa saịtị m n'ụzọ dị otu a, ma ugbu a, m na-enye ha ọrụ.